You are at:Home»मनोरञ्जन»आफ्नो हुलिया कपिराइट गराउने बलिउड संगीतकर्मी
काठमाडौं । आफ्नो सिर्जनामाथि अरुले दावी गर्न सक्छन्, अरुले नक्कल गर्न सक्छन् भनेर सर्जकहरु सशंकित रहन्छन् । उनीहरुको शंकालाई ढुक्क बनाउने कानुनी विधी छ, कपिराइट लिने । तर, सर्जकहरु आफ्नो सिर्जना मात्र होइन, हुलिया अर्थात गेटअपको पनि कपिराइट गराउँदा रहेछन् । कथा धेरै परको होइन, दक्षिणी छिमेकी भारतिय संगीतकर्मीको हो । आफ्नो गेटअपको किन कपिराइट गरिएको होला ?कथा रमाइलो छ ।
बलिउडका पुराना संगीतकार तथा गायक बप्पी लहिरीले आफ्नो हुलिया (गेटअप) को कपिराइट गरेका छन् । अर्थात, अब कुनै पनि फिल्ममा कुनै पनि कलाकारले उनको लुकलाई अनुशरण गरेर क्यारिकेचर गर्न सक्ने छैन ।
यति नै बेला बप्पी लहिरीका छोराले उनका बुवाका लोकप्रिय गीतहरुलाई नयाँ शैलीमा संगीतबद्ध गर्दे एल्बम ‘म्युजिक रुप सिरिज वन’ मार्फत स्रोतामाझ ल्याएका छन् । उक्त एल्बमका सबै गीतहरु अनुराधा पालाकुर्थीले गाएकी छिन् । उक्त एल्बमलाई जूजू संगीत कम्पनिले निर्माण गरेको हो ।
बप्पी लहिरीलाई सधैं नै एउटै स्टाइलका कपडा तथा सुनको सिक्रि लगाएको देख्न पाइन्छ । बलिउडका थुप्रै वटा फिल्महरुमा केही कलाकारहरुले उनको जस्तै रुप धारण गरेर कमेडी प्रस्तुत गरिसकेका छन् । त्यस प्रकारको नक्कल तथा कमेडी बप्पी लहिरीलाई भने मन परेको रहेनछ । फलस्वरुप, बाध्य भएर उनले आफ्नो लूकमै कपिराइट लगाइदिएका रहेछन् ।
उनी भन्छन्,‘हाम्रो फिल्मकर्मीहरु निकै तेज छन् । उनीहरु कुनै पनि कलाकारलाई मेरो जस्तै कपडा, सुनको ब्रासलेट र सिक्री लगाइदिएर कमेडी गराइरहेका थिए । मलाई भने त्यो दृष्यले मेरै अपमान भैरहेको अनुभव गरायो । अब भने त्यस्तो कसैले पनि गर्न पाउने छैन ।’
हरेक व्यक्तिले के सौच्दछन भने हातमा सुनको ब्रासलेट, घाँटीमा सुनको सिक्रि लगाउने बित्तिकै बप्पी लहिरी बन्न सकिन्छ । तर यसरी कुनै पनि व्यक्ति बप्पी लहिरी कसरी बन्न सक्छ रु बप्पी लहिरी बन्नका लागि धेरै नै तपस्या गर्नु परेको छ । वाक्क भएर अहिले आएर मैले आफ्नो लूकको कपिराइट गरिदिएको छु । यदि कुनै पनि फिल्ममा मेरो लुकलाई कसैले नक्कल गर्‍यो भने, उनीहरुलाई म लाखौं डलरको मुद्दा हाल्ने छु । साँच्चै भन्दैछु, धेरै वटा फिल्महरुमा मैले के देखेको छु भने केही कलाकारहरुले मेरो जस्तो कपडा लगाएर र सुनका गहना गाएर कमेडी गरिरहेका छन् । त्यो देखेर मलाई भित्रभित्रै नरमाइलो लाग्यो । त्यसैले अब मैले कपिराइट गरिदिएपछि कसैले पनि त्यसलाई नक्कल गर्न पाउने छैन ।’
बप्पी लहिरीको उक्त पहिचान भारतमा मात्र होइन, विश्वभरी नै छ । उक्त कुरालाई स्विकार गर्दै बप्पी लहिरी भन्छन्, ‘मेरो यो स्टाइल विश्वभरी नै लोकप्रिय छ । जहाँ जहाँ एशियनहरु बसोबास गर्छन्, उनीहरुलाई थाहा छ त्यस प्रकारको पहिरन बप्पी लहिरीले मात्र लगाउँछ । एक पटक म जाडो मौसममा न्यूयोर्क गएको थिएँ, त्यहाँ निकै चिसो थियो, त्यसैले मैले चिसोबाट बच्नका लागि बाहिरबाट तातो पहिरन लगाएको थिएँ । उक्त पहिरनले मेरा सुनका गहनाहरु बाहिरबाट छोपिए । एक जना व्यक्ति आएर मलाई सोधे,’बप्पीजी, तपाईंको सुनको सिक्री खै ? ‘पुरै भारतमा यस्तो कुनै गायक छैन, जसले म जस्तै गरी सुन लगाएर हिँड्छ ।’
बप्पी लहरीले आफ्नो लूक कोबाट प्रभावित भएर बनाएका होलान् ? यो जिज्ञासामा उनको जवाफ छ,‘मेरो आदर्श व्यक्ति हलिउडका गायक एल्विस प्रेस्ली हुन् । उनी पनि सुनका सौखिन थिए । हातमा ब्रास, घाँटीमा ठूलो क्रम भएको सिक्री आदि लगाउँथे । म जब फिल्म क्षेत्रमा आएँ, त्यहि बेला मलाई मेरी आमाले पहिलो पटक सुनका सिक्री उपहार दिइन् । त्यसपछि मेरी श्रीमतीले गणेशको प्रतिमासहितको सिक्री बनँइदिइन् । त्यही दिनदेखि मैले सुनलाई भाग्यशाली मान्न थालें । सुनकै कारण विश्वभरी नै मेरो एउटै इमेज स्थापित भयो ।’
आफ्नो शरीरमा लगाइएका गहनाहरु प्रति बप्पी लाहिरीको भनाइ छ,‘यदि तपाईंले ध्यान दिएर मेरो सिक्रीमा हेर्नु भयो भने त्यसमा तपाईंले गणेशजी देख्नु हुनेछ । त्यसलाई पल्टाउनु भयो भने अल्लाह देखिने छन् । यदि तपाईंले मेरो दोस्रो सिक्री हेर्नु भयो त्यसमा कृष्णलाई देख्नु हुनेछ, त्यही सिक्रीलाई पल्टाउनु भयो भने जिसस पनि देखिने छन् । म त हरेक धर्मलाई इज्जत गर्छु । यीनिहरुलाई म ईश्वरको आशीर्वाद सम्झेर घाँटीमा झुण्ड्याएर हिँड्छु । म जातले ब्राम्हण हुँ । तर म हरेक धर्मलाई उत्तिकै सम्मान गर्छु । जन्मले नै म हिन्दु हुँ, त्यसैले हिन्दुत्व मेरो धर्म हो । तर म अन्य धर्मलाई अपमान गर्दिन । म हरेक व्यक्तिलाई के भनिरहेको हुन्छु भने तपाईं आफ्नो धर्म मान्नु होस्, तर अर्को धर्मलाई कहिले पनि अपमान नगर्नु होस् ।’
बलिउडमा बप्पी लहिरीको छवि ‘गोल्ड म्यान’ को छ । उनी भन्छन्,‘मैले प्रँयः ठाउँहरुमा भनिसकेको छु,बप्पी लहिरी इज गोल्ड म्यान । मेरो लागि सुन भाग्यशाली छ । मैले जहिलेदेखि सुन लगाउन थालें, त्यही दिनदेखि मेरा एकपछि अर्को गदै सबै गीतहरु लोकप्रिय हुन थाले ।’
यति मात्र होइन, बप्पी लहिरी आफ्ना सुनका गहनाहरु अरु कसैलाई पनि दिंदैनन् । उनी भन्छन्,‘मैले घाँटिमा जुन सिक्री लगाइरहेको छु, यो त म कसैलाई दिंदै दिन्न, किनभने म यिनीहरुलाई आफ्नो रक्षक मान्छु, यीनकै आशीर्वादले म अघि बढिरहेको छु ।’